Ukuvakashela i-Vredefort Dome
Isakhiwo se-Vredefort Dome
Isakhiwo esiphelele seVredefort Dome sisondele ngaphezu kwendawo engumbuthano onamakhilomitha angamakhulu amathathu. Isukela phezulu eGoli ngasenyakatho empumalanga kuya eWelkom eningizimu -ntshonalanga. indawo yangaphakathi impela neDome ine dolobhana elincane okuthiwa iVredefort. Ingxenye ebalulekile ngokomlando, ivinjelwe endaweni engasemaphandleni angamakhilomitha ayikhulu namashumi amabili eningizimu-ntshonalanga yeGoli, ngasogwini loMfula uVaal.
Le ndawo enezintaba eziningi isebenza njengesikhumbuzo sesimo esiphakeme esabonakala phakathi kwembobo enkulu entabeni ephuquka umlilo yokuqala. Lapha,
isiqongo esiyindingilizi phezulu esindala siye saguguleka ,kwakha ugema nezigodi ezijikeleza zidlula phakathi kweVredefort, iParys nePotchefstroom.
Lezi zindawo zasemadolobheni zisezindaweni ezihamba phambili kodwa aziyona ingxenye yendawo enkulu, ukuze ukuthuthukiswa kwamadolobha kungavinjelwe umthetho ovikela isabelo sefa.
Imingcele yendawo eyinhloko
Imingcele yendawo eyinhloko ihambelana nemigwaqo eminingana ehlanganisa amadolobha amithathu. Umngcele osempumalanga ungumgwaqo weParys-Potch (R53). Umgwaqo weSchoemansdrift-Potch (ingxenye yetiyela -ingxenye amatshe) usemaphethelweni asentshonalanga. Umgwaqo wamatshe oya empumalanga kuya entshonalanga (obizwa ngeSchoemansdrift) uxhuma imigwaqo emibili yePotch esifundeni seNyakatho-Ntshonalanga.
Futhi, eningizimu, kunezindlela eziningana zemigwaqo yamatshe eyenza ukuma kwesigamu senyanga eFree State. Eduze nale ndawo eme njenge skweleNgalesi sakhiwo skwele -ish sendawo kukhona indawo ehamba phambili yamakhilomitha amahlanu. Ngaphakathi esifundeni seDome ugijima uVaal (okusho 'ophuzi' noma 'uthuli') uMfula, ogeleza ukusuka empumalanga kuya entshonalanga.
I-Vaal iyindlela emanzi yamanzi aseNingizimu Afrika futhi iyasiza ekunikezeni iGoli nendawo ezizungezile zezimboni ngamanzi. Iningi lalezi zisebenzi zezimboni zenzeka ngaphesheya kweDome, emadolobheni aseSasolburg, eVanderbijlpark naseVereeniging. Umfula weVaal uphinde uthandwa njengendawo yokudlala yamanzi, ukunikeza ukudoba, ukuhamba ngemikhumbi, ukuhamba ngezinyawo, ukuhamba nge-kayaking kanye nokunye kwamanzi amhlophe. Idamu leVaal, ephuma kuVereeniging, yinye indawo ehlala kahle yeholide.
Incasiselo yesimo sendawo esiyaluzayo
Ngenxa yesimo sendawo esiyinkimbinkimbi seDome, ukugeleza koMfula uVaal kuyaphazanyiswa ngokudlula ezingqimbini zamatshe. Lokhu kubangela ukuthi amanzi asheshe futhi ahlukanise zibe yimifudlana eminingi , ehlukaniswe omunye nomunye ngamakhulu ezinqamula ezincane. Isikhulu kunazo zonke kulezi ziqhingi singama-150ha, kanti esinye sinemigodi eyisishiyagalo lunye zegolf. Lesi siqhingi sasekugcineni, okuthiwa i-Golf Island, sixhunyaniswe neParys ngesibhuloho esihle esincane sokumiswa.
Iziqhingi zechweba laseVaal zicebile izilwane, izitshalo kanye nezinyoni zezilwane. Zibuye zaba nemijondolo nezinye izinto ezingafuneki, ikakhulukazi indawoe zungeze indawo yaseParys lapho iziqhingi zinkulu futhi ziningi. Phakathi neMpi Ye-Anglo-Boer yesibili, lezi ziqhingi zaphinde zahlalwa ngabasindile kanye namalungu empi ashiye ibutho bebengena emfuleni futhi bezifihlile emifino eluhlaza.Lezi ziqhingi zaziyizwe elingathathi hlangothi; izwe elingenamuntu ongelona i-Orange Free State noma i-Transvaal.
Ngasekupheleni kweminyaka yama-1800, lesi simo sasinselelwa yizifundazwe ezimbili, bobabili bathi lezi ziqhingi zazabo. Impi ende yezomthetho yazama ukuxazulula ukuthi yiziphi iziqhingi ezazingezona zabo. Ekugcineni, ikomidi elikhethekile lasungulwa ukuze lihlolisise isiqhingi ngasinye futhi emva kwalokho lunikeze kwelinye izwe noma elinye. Ngokuqondakalayo, lezi ziqhingi azivunyelwe ukuba zihlukaniswe phakathi. Ngo-1895, i-'Vaal River Island Treaty 'isayinwe. I-Transvaal yayineziqhingi eziyikhulu kanti i-Free State yayinamashumi ayisishigalolunye. Manje yilokho engikubiza ngokuthi indawo yokuhlala!
Namuhla, uMfula uVaal ubonisa umngcele phakathi kwesifundazwe saseNorth West kanye nesifundazwe saseFree State. Ngakho-ke i-Dome igxila iziphathimandla ezimbili zesifundazwe futhi lokhu kuye kwenza ukuthuthukiswa nokukhangisa kwayo kube nzima. Ngaphezu kwalokho, indawo eyinhloko yeDome ihlanganisa amapulazi angaphezu kwe khulu kanye nabomasipala besifundazwe. Omunye uthemba ukuthi wonke umuntu uzokwazi ukudlala kahle futhi avumele ukuthi i-Dome ikwazi ukusebenza kahle. Sicela wazi ukuthi eziningi zezinto ze-Dome ezikhangayo zisezweni elizimele futhi angeke zivakashelwe ngaphandle kwemvume yomnikazi womhlaba.
Driving Through the Vredefort Dome
Indlela-sango eya eVredefort Dome yiParys, idolobha elihle eleholide elakhiwe eceleni kodonga lomfula weVaal. Ukuze ufinyelele eParys uvela eGoli, thatha iN1 South, ulandela izimpawu zeBloemfontein....more
Flora and Fauna in Vredefort
I-Vredefort Dome itholakala emphakathinI omkhulu owenzeka ngokwemvelo weziqhingi, lapho kuqhamuka phakathi kwendawo ephakeme yeHighveld ne-Transvaal....more
The Town of Vredefort
Nakuba idolobha laseVredefort linikeze iDome igama layo,akukhona okunye okuheha abavakashi kulo mzana othulile....more